Gigalight Inotarisa Rakazara Range re200G Optical Transceivers yeDhiver Center Center GIGALIGHT
Gigalight Inotarisa Rakazara Range re200G Optical Transceivers yeDhiver Center Center
Zuva: 2020-06-08 Author: Gigalight 6667 Tags: 200G , QSFP56 , 50G PAM4 , transceivers optical
Shenzhen, China, June 8, 2020 - Gigalight, anotungamira wepasi rese weanogadzira ekubatanidza dhizaini dhizaini, akatanga chirongwa chakazara che200G data centre transceivers optical ichibva pa50G PAM4 DSP chikuva chekusangana nezvinodiwa zvegore komputa vatengi kune yakakwira bandwidth.
Izvo zvichangotangwa zvigadzirwa zvinosanganisira:
200G QSFP56 SR4 / AOC-VCSEL laser, inosvika 100m pamusoro pe OM4 fiber, uye 5W yakanyanya kushandiswa kwesimba.
200G QSFP56 DR4-4 yakafanana isina kubhadharwa EML lasers, anosvika 500m (akajairwa) kana 2km (akawedzeredzwa) pamusoro peSFF, uye 5.5W simba rakawanda rekushandisa.
200G QSFP56 FR4-yakatonhorera CWDM EML lasers, kusvika 2km (standard) kana 10km (yakakwidziridzwa) pamusoro peSFF, uye 7W yakanyanya kushandiswa kwesimba pakazara tembiricha yekushisa.
200G QSFP56 LR4-yakatonhorera LAN-WDM EML lasers, kusvika ku10km pamusoro peSFF, uye 7W yakanyanya kushandiswa kwesimba.
Gigalight200G nyowani QSFP56 dzakatevedzana products une zvimwe zvakanaka musimba rekushandisa dhizaini, uye inogona kuvimbisa zero kukanganisa kutapurirana ne post-FEC uye 100% FEC margin performance, ayo akakodzera kwazvo kune data centre kunyorera.
Gigalight's 200G Optical transceiver portfolio inogona kukamurwa kuva 8-chiteshi 25G NRZ nhepfenyuro uye 4-chiteshi 50G PAM4 yakatevedzana, iyo inotora yakazvigadzira yakazvimiririra yeinternet injini michina yekusangana nezvinodiwa zvehuwandu hwekugadzira, uye inogona kubatsira kuvaka chimiro chakasimba chebudiriro. of inotevera-chizvarwa data nzvimbo 'IT zvivakwa.
Previous:GIGALIGHT yekuratidzira 5G Sarudza ... Zvadaro:Gigalight's 10GBASE-T SFP+ Mo ...